EU yakurudzira kumisa kutyorwa kwekodzero dzevashandi veAlitalia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » EU yakurudzira kumisa kutyorwa kwekodzero dzevashandi veAlitalia
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Italy Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
ETF inoshora zvikuru chokwadi icho European Commission yakundikana kupa chero kufunga kune kodzero dzevashandi dzepamutemo pasi peEuropean Pillar of Social Rights.
ITA yakapihwa mwenje mutema kutora chikamu cheanoshanda maAlitalia.
Sarudzo iyi kutyora kwakanyanya kwehurongwa huripo hwekutaurirana, mubatanidzwa unodaro.
Sarudzo yeKomisheni inokanganisa hupenyu hwevanhu vanopfuura zviuru gumi nezviviri.
European Transport Workers 'Federation inoshora zvine mutsindo mhedziso dzakaziviswa nhasi neEuropean Commission maererano neAlitalia / Italia Trasporto Aereo SpA (ITA) kesi iyo inopa mwenje wakasvibira kukambani nyowani, ITA, kutora chikamu cheanoshanda eAlitalia.
Takakatyamadzwa kuti European Commission yaigona kuve nyore uye isina kana hanya nekodzero dzevashandi yakatora danho rakadai. Semaonero edu, uku kurova kwakaomarara uye kutyora kwakadzama kwehurongwa huripo hwekutaurirana muItaly, kupomhodza kuedza kwakaomarara kwemasangano evashandi eItari nevashandirwi mukutaurirana zvibvumirano zvitsva zvinoshanda. Panzvimbo iyoyo, chinzvimbo cheEC nhasi chiri kusimudzira zvibvumirano zvitsva uye zvinogona kunetsekana zvevashandi. Komisheni iri pachena inotungamirwa kuitira mutengo-mushandirapamwe uye irikuzviita ichikanganisa kubhururuka kwekufamba nendege, kunyanya nharaunda inofambika nendege.
Livia Spera, Munyori Mukuru we ETF anozivisa kuti:
Uku kurova kumeso kune vashandi vaAlitalia, mhuri dzavo pamwe nemubatanidzwa wavo. Sarudzo yeKhomisheni iyi inokanganisa hupenyu hwevanhu vanopfuura zviuru gumi nembiri uye mhuri dzavo uye kushandisa zvirevo zvakadaro zvinosemesa uye zvinodzora kushushikana kwavo. Mukubatana nevamwe vatinoshanda navo avo nhasi vanga vachiratidzira pamusoro peiyi nzira isina kukodzera uye isingagadzirisike, ndiri kukumbira kuEuropean Commission kuti ibvise chirevo chayo uye itarisezve zvinangwa zveiyi mvumo yekubatsira nyika, iyo isingatsigire indasitiri yendege inoenderera, uye isingatsigire vagari veEurope.
Pamusoro pezvo, iyo ETF inoshora zvikuru chokwadi icho European Commission yakundikana kupa chero kufunga nezvekodzero dzevashandi dzepamutemo pasi peEurope Shongwe Yekodzero Dzevanhu, kusanganisira asi kwete kuganhurirwa kumisimboti yebasa rakachengeteka uye rinochinjika uye nhaurirano yemagariro. Zvakare, ETF inokwezva kune chokwadi chekuti EC iri kucherechedza chero kuyedza kuchengetedza zvibvumirano zvevashandi zvevashandi kuti vatorerwe nemutakuri mutsva, ITA.
Iyo ETF iri kutsigira zvizere vashandi veAlitalia kuItari varatidzira nhasi, mukuyedza kwavo kuvhurazve kutaurirana nemushandirwi mutsva, ITA. Izvi zvinofanirwa kuitwa neruremekedzo ruzere kumutemo weItaly, uye nekuziva kodzero yekuungana pamwe chete padanho renyika.